Gamtaa Afriikaa keessatti 'hojii argachuun saalqunnamtiin akka jijjiiramu' saaxila bahe - BBC News Afaan Oromoo
Gamtaa Afriikaa keessatti 'hojii argachuun saalqunnamtiin akka jijjiiramu' saaxila bahe
Dura ta'aan Komishinii Gamtaa Afriikaa erga xalayaa yaaddoon rakkoo tuttuqqaa saalaa isaan qaqqabee booda koree dhimma kana irratti hojjetu hundeessanii hordofaa jiru
Qorannoon akka saaxila baasetti tuttuqqaa saalaa dubartoota irrra rakkoo cimaa Komishinii Gamtaa Afriikaa keessatti mullatudha.
Akka gabsaani kun mul'isutti dubartoonni miidhaan tuttuqqaa saalaa kanaaf saaxilamanhojjetoota yeroo gabaabaadhaaf qacaraman, shamarran hojii tola-ooltummaa irratti bobba'aniifi warra hojjii shaakaluun achumaan hojii barbaadatanidha.
Warreen itti-gaafatamoo ta'an kunneen "akka ofii isaanii 'warra karra eeganiitti' ('gate-keepers') akkasumas 'warra murteessoo ta'an' ('king-makers')" akka ta'anis gabaasichi dabalee ibseera.
Mana barnootaa dubartoota Chaayinaa 'naamusa' barsiisu
Kuweet hojattoota manaa Itoophiyaarraan barbaada jette
Asiida akka meeshaa waraanaatti?
Gaaffiin dhimma kana qorachuuf kan jalqabame baatii Caamsaa keessa yommuu ta'u, miseensonni hojjetootaa mufii qaban icciitiidhaan gaaffiffi deebii kennuu ni danda'u.
Koreen addaa dhimma kana hordofus Durata'aa Komishinii Gamtaa Afriikaa kan ta'an Muusaa Fakiitiin erga xalayaan dhimma tuttuqqaa saalaa kana agarsiisu dhoksaadhaan isaan bira ga'ee kan hundeessan.
Koreen himannaa tuttuqqaa saalaa 44 kan ijoollee durabaa irra ga'e adda baase "hoojjii argachuudhaaf saalqunnamtii raawwachuu" isaan gaafaata jedha.
Gabaasichi namoota kachachala kanaan shakkaman maqaan hin himne.
Hojjetoonni tuttuqqaa saalaa kana duuba jiran "ijoollee durabaa kana hojii akka qacaran waadaa galuufiifiin" jedha gaabsni kun.
Komishiniin Gamtaa Afriikaa imaammata dhaabbaticha keessatti rakkoo tuttuqqaa saalaa ittiin ittisu waan hin qabneef rakkoo tuttuqqaa saalaa madatan gabaasuun yeroo baayyee rakkoo nama irratti uuma jedhan warreen gaaffii qorannoo kanaa gaafataman.
Gareen qorannoo kun yakkawwan akka malaammaltummaa, arrabsoo, loogii gochuufi rakkisuullee akka adda baase himameera.
Obbo Fakiin imaammanni ittiin yakka tuttuqaa salaa ittisan jiraachuu qaba jedhu
Gaazexoonni Afriikaa Kibbaa 'Mail' fi 'Guardian' jedhaman qorannoo kana gaggeessuun kan eegalame erga dubartoonni 37 miseensa hojjetoota Gamtaa Afriikaa ta'an rakkoon tuttuqqaa saalaa Komishinicha keessa jiru irratti komii qaban himachuuf mallattoodhaan iyyata isaanii galfatanii boodadha.
Komishiniin Gamtaa Afriikaa wiirtuun isaa magaalaa guddittii Itoophiyaa Finfinnee keessatti argamu akka jedhutti, qorannoon kuniifi himanni dhiyaate cimaa ta'uu isaarraa kan ka'een "imaammata hunda galeessa ta'e rakkoo tuttuqqaa saalaa ittiin ittisuun danda'amuufi kan warra rakkoon kun irra ga'eef eegumsa taasifamu, akkasumas adabbiin sirriin namoota yakka akkasii raawwatan ittiin adabaman" hundeessaa jira.
Obbo Faakiin koree keessoo dhimmoota rakkoo jiru jedhaman kana qoratu qoratee gabaasu akka hundeessan, ibsi ba'e tokko ni agarsiisa.
Miidhaa saalaa Itoophiyaatti: Asiida akka meeshaa waraanaatti?
Miidhaawwan saala bu'uureffachuun dubartoota Itoophiyaarra gahaa jiran yeroodhaa gara yerootti fooyya'iinsa agarsiisuun hafee itti cimaa jiraachuu ragaan Waldaan Dubartoota Oggeessoota Seeraa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa.
20 Waxabajjii 2018
Kuweet erga ajjeechaan lammii Filippiin irratti raawwatameen walaqabatee biyyattiin namootashee ergu dhaabdeen asi hojjattoota manaa Itoophiyaarra akka barbaaddu ibsite.
4 Ebla 2018
'Haacaaluun jiraatti weelluun akkuma godhe du'a isaattillee Oromoo tokko taasise'
Hacaaluun akkuma jiraatti weelluu qabsoo isaatiin lammilee bilisummaafi haqaaf falman tokkoomse du'a isaattillee Oromoo Lixaafi Bahaa, Kaabaafi Kibbaa akkasumallee alaafi keessa jiran tokko taasiseera jechuun gaazexaan beekamaa Zee Niiwuu Yoork Taayimsi gabaaseera.
5 Adooleessa 2020
Ajjeechaa Haacaaluu hordofuun namoota 166 lubbuun darbe-Poolisii
Wallee Haacaaluun erga ajjeefamee asitti hiriira mormii Oromiyaa wal gaheerratti namoonni kunneen ajjeefamuu ragaa poolisiin Sambata duraa ibse wabeeffachuun barruun The Gardians gabaasera.
Raapperiin beekamaa Kaaniyyee Weest Pirezedaantummaaf akka dorgomu beeksise
Raapperiin Ameerikaa beekamaa Kaaniyyee Weest Pirezedaantummaaf akka dorgomuuf jiru kaleessa beeksise. Kana jechuun ammoo nama baayyee akka jaallatu himamu Pirezedaant Doonaald Tiraamp waliin wal dorgoma jechuudha.
Imbaasiin Itoophiyaa Landan jiru 'miidhaan narra gahe' jedhe
Namoonni ajjeechaa artisti Haacaaluu Hundeessaatiin dheekkaman Imbaasii Itoophiyaa Landaniitti argamurratti miidhaa qaqabsiisuu qondaalii Imbaasichaa tokko BBC'tti hime.
Waldhibdee Hacaaluu eessatti owwaalla jedhu irratti uumame
Reeffi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kan guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame gara bakka dhaloota isaa magaalaa Ambootti geeffamaa jira.
30 Waxabajjii 2020
''Muuziqaan anaaf jireenya kooti. Firan itti horadhes, diinan itti horadhes. Muuziqaan ana keessa koo jira. Akkaataa jiruufi jireenya saba kiyyaa kanan itti ibsu, quuqama garaa kiyyaa kanan itti baasu. Muuziqaan waan hunduma kiyyaa anaaf.''
"Guguddaa nama keenyaa qofa miti, guguddaa lafa keenyaas dhabaa jirra"
Torbee kana kitaaba walaloo Afaan Ingiliziin qophaa'ee mata duree Ate-Loon jedhu dubbistoota biraan gahuuf kan jiran Dr Asafaa Tafarraa Dibaabaa waa'ee qabiyyee kitaabichaa BBC'tti dubbataniiru.
29 Waxabajjii 2020
Naannoon Tigraay filannoof wixinee seeraa lama qopheesse
Naannoon Tigraay wixinee labsii komishinii Filannoo hundeessuuf qophaa'e akkasumas labsii dambii filannoo qopheessee boru irratti mari'achuuf akka jiru BBC'n ragaa argateera.
, Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee wantota ta'an keessaa
Oduun du'aatii Haacaaluu erga dhaga'amee booda godinaalee Oromiyaa garagaraatti maaltu ta'e? Haalli amma irra jiruwoo maal fakkaata?
Waajjirri OBN Intarnaashinaal ajjeechaa Haacaaluun dheeekkamaniin caccabe hojii dhaabuu ibse
'Diraamaan waraana wal waliinii yaadamee ture fashalaa'eera'
Pirez. Muhaammaduu Buhaarii barata maallaqa borsaa guutuu lafaa argee deebise leellisan
Siidaan mootii H/Sillaaseefi abbaa isaanii namoota ajjeechaa Hacaaluun dheekkamaniin diigaman